Ukuphupha ngesigqubuthelo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Izimbozo zihlala zisetyenziselwa ukugubungela iinwele, iinxalenye zobuso, okanye intloko yonke. Zihlala zenziwe ngezinto ezikhanyayo ezinje nge-tulle okanye i-chiffon kwaye ziyagqobhoza njengenetha. Kwiimeko ezininzi, ukunxitywa kwesigqubuthelo kwenziwa ngenxa yesiko. Umzekelo, kuyinto yesiko ukuba oomolokazana abaninzi banxibe isigqubuthelo somtshato emtshatweni kwaye bawenze nenxalenye yelokhwe yomtshato ngexesha lomsitho womtshato.
Xa isigqubuthelo sibonakala kuthi njengophawu emaphupheni ethu, kuhlala kunokubonakaliswa okhethekileyo okomfuziselo. Iimeko ezithile apho isambatho sidlala indima ephupheni zihlala zithathelwa ingqalelo xa kutolikwa umfanekiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, ukubona isigqubuthelo kuthathwa njengesilumkiso. Kukhuthaziwe, Inkohliso kunye Uhlazo. Umphuphi unokuthi, ukuba ubona umntu onesigqubuthelo ephupheni, aphathwe lula kwaye axhatshazwe ngamanye amadoda. Abanye abantu banokuzenza ngathi banobuhlobo. Cinga ngononophelo malunga nokuba ngubani onokumthemba.
Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lubona ngokuchasene neemeko zamaphupha apho umntu oleleyo enxibe isigqubuthelo. Kule meko, unokuba nguye ukunganyaniseki, nokuba ngowabanye abantu okanye yena. Isimboli yephupha "isigqubuthelo" silumkisa umphuphi ukuba angakhohlisi abanye abantu kwaye ngokulinganayo angaxoki yena.
Ngamaxesha athile, imeko yephupha apho umntu anxibe isigqubuthelo inokukhokelela nakwiimeko ezoyikisayo. Ukucandwa kwemida Ukubiza umnxeba. Kule meko, ukuphupha kufuneka ulumke ungarhoxisi kakhulu uye wedwa. Kufuneka ivule ngakumbi.
Ukongeza, indalo yesigqubuthelo sephupha nayo ibalulekile ekutolikeni. Umzekelo, isigqubuthelo sokulila sibonisa ukuba iziganeko ezoyikeka ezibuhlungu kubomi babucala aziyi kubakho. Nangona kunjalo, ukuphupha kufuneka ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha kwi ukuhluleka esekwe kwishishini. Isikhuselo esiluhlaza kwelinye icala siyalumkisa Uhenyuzo.
Ukunxiba isigqubuthelo somtshato ngokusisiseko kufuneka kuvavanywe ngokuqinisekileyo: ngakumbi kwimeko yobungcali, amaphupha anokulindela uyolo kunye nezithembiso. Utshintsho. Nangona kunjalo, ukuba sisigqubuthelo somtshakazi ongaqhelekanga, uphawu lwephupha lubonisa ingozi yokuphoxeka kwimicimbi yothando. Kukwanjalo nakumaphupha esigqubuthelo somtshato: nkqu nakwiimeko ezinjalo, ukungoneliseki kuyasongela kwaye ukuphoxeka ngokunxulumana.
Ukuba ubona inenekazi elifihlakeleyo lifihla ubuso balo emva kwesigqubuthelo esincinci ephupheni, oku kungabonisa umsindo okanye inkohliso kwimicimbi yothando.
Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kuhlala kusibona isigqubuthelo ephupheni njengophawu lwe Iimfihlakalo. Kungenzeka ukuba iqela elinomdla lizama ukukopela iqabane lalo, lifihla into ethile okanye lizifihle. Umfanekiso wephupha lesigqubuthelo ucebisa ukuba woyika "ukuvezwa" aze anganeli. Ngokwe-psychoanalysts, kuhlala kukho oku ukuzijongela phantsi.
Ngamaxesha athile, isimboli sephupha 'sekhuselo' emva kwale ndlela yokutolika amaphupha nawo Icandelo le-subconscious bonisa into eleleyo, yintoni eyoyikisayo. Usenokutyekela ekuphepheni inyani, uzahlule, kwaye ungavumi ukuvuma izinto ezithile. Nangona kunjalo, umfanekiso wephupha kukunyanzela ukuba usebenze ngokwakho. Umphuphi kufuneka afunde ukujongana naye kunye neenkalo ezahlukeneyo zakhe.
Emaphupheni abancinci kakhulu, ngokokuhlalutya ngokwengqondo kwephupha, isigqubuthelo ikwaluphawu lomntu ubuntombi. Isigqubuthelo somtshato, ngakumbi, sibonisa ubumsulwa ngokwesondo emaphupheni amabhinqa aselula, kunye nalawo abafana.
Ukuba isigqubuthelo ekugqibeleni sikrazukile kwimeko yephupha, umfanekiso wephupha ufuzisela ukuthoba isidima okwenzekileyo.
Uphawu lwephupha «isigqubuthelo» - ukutolika kokomoya
Ngokwengqiqo yokomoya, isigqubuthelo sifakwa ephupheni ulwazi olufihliweyo imele, elo phupha alikafumaneki.
Ngapha koko, uphawu lwephupha "isigqubuthelo" sinokumela yonke into eyimfihlakalo okanye efihliweyo ngokwendlela yokuchazwa kwephupha.